Manicure -ka Faransiiska ee guriga cidiyaha gaaban | Bezzia
Manicure -ka Faransiiska ee guriga ciddiyaha gaagaaban
Susana godoy | 11/10/2021 10:00 | Quruxda
Inaad gurigaaga ku samaysato manicure -ku waa had iyo jeer fikrad fiican. Sababtoo ah sidan oo kaliya ayaan ku hagaajin karnaa ciddiyahayaga markasta oo aan rabno. Laakiin haddii aad rabto inaad ogaato sida loo sameeyo a Manicure Faransiis guriga ciddiyaha gaaban, markaa waxaad u baahan tahay inaad raacdo dhowr tallaabo oo aad u fudud.
Waxaad arki doontaa in xirfad yar aad mar walba ku heli karto wax kasta oo aad rabto. Marka hore, waa inaad sameysaa xulashada qalabka ama alaabta ugu fiican halkaasna waxaad ka bilaabi kartaa shaqadaada oo noqon doonta tan ugu xiisaha badan uguna dhaqsaha badan. Miyaan hoos ugu dhaadhacnaa?
1 Si fiican u nadiifi cidiyahaaga ka hor intaadan bilaabin
2 Si fiican u jar cidiyahaaga oo isticmaal fayl
3 Had iyo jeer ka taxaddar cuticles -kaaga
4 Saldhigga difaaca ee lagu sameeyo manicure -ka Faransiiska guriga ciddiyaha gaagaaban
5 Dhaldhalaalka salka
6 Tilmaamaha wanaagsan ee manicure
Si fiican u nadiifi cidiyahaaga ka hor intaadan bilaabin
Nadiifintu had iyo jeer waa mid ka mid ah tillaabooyinka ay tahay inaan tixgelino ka hor intaanan bilaabin wax shaqo qurux ah. Sidaa darteed, musmaarradu ma ahayn kuwo laga tegi doono. Haddii aad leedahay dhaldhalaalka hadhay, waxaad hore u ogayd inay ugu fiican tahay inaad ka saarto tirtirida ciddiyaha oo haddii kale, waxaad mar walba dalban kartaa liin dhanaan si aad uga tagto wasakhda qaarkood. Xusuusnow in duugista gacmaha oo leh dhawr dhibcood oo saliid ah ay baabi’in doonto dhammaan noocyada qalalan natiijaduna ay ka sii fiicnaan doonto.
Si fiican u jar cidiyahaaga oo isticmaal fayl
Si guriga loogu sameeyo manicure Faransiis ah ciddiyaha gaagaaban, waxaan u baahanahay inaan jarno. Sababtoo ah dhammaystirku wuxuu ahaan doonaa mid xarrago leh sida ciddiyaha dhaadheer dabcan waxay ku siin doonaan natiijo fudud oo aad maalin walba xiran karto, adigoon noqon mid gaar ah. Sidaa darteed, waxaad ka tagi kartaa labadaba dhowr milimitir oo dhidib ah waxaadna i siin kartaa qaabka aad rabto faylka. Waxaad dooran kartaa dhammaystirka afargeeslaha ah ama dhammaadka ah, iyadoo ku xidhan baahidaada. Xusuusnow in sida loo fayl gareeyo ay mar walba ka fiican tahay gudaha iyo dibaddaba.
Had iyo jeer ka taxaddar cuticles -kaaga
Taas jarista iyaga ayaa naga dambeysa, maxaa yeelay waxaan sameyn karnaa tallaabo aad uga sahlan oo usha geedka liinta ah ama aalad gaar ah u leh aaggan, kaasoo noqon doona ka -gooyaha gooyaha. Xusuusnow ka hor intaadan go'aansan, waxa ugu fiican ayaa ah xoogaa qoy oo waxaad kaloo ku samayn kartaa dhibic saliid saytuun ah. Tani waxay jilcin doontaa aagga waxayna sahli doontaa in lala shaqeeyo. Wax yar baan dib u riixnaa oo natiijadu waxay noqon doontaa sida la rabo.
Saldhigga difaaca ee lagu sameeyo manicure -ka Faransiiska guriga ciddiyaha gaagaaban
Markaan diyaarinno ciddiyaha, waa waqtigii la ilaalin lahaa ka hor inta aan la nadiifin. Sidaa darteed, waa inaan had iyo jeer gacanta ku haynnaa saldhig ilaalin ah. Iyada oo aan ku daryeeli doonno ciddiyaha, waxaan siin doonaa fuuq -celinta lagama maarmaanka ah isla mar ahaantaana waxay ka dhigeysaa midabada dhaldhalaalka mustaqbalka inay u muuqdaan kuwo la xoojiyay xitaa ka sii badan. Waa mid ka mid ah tallaabooyinka muhiimka ah, sababtoo ah habkaas ayaan uga hortegi doonnaa inay jaale isu beddelaan. In kasta oo aad xusuusnaato inaadan marar badan naqshado samayn, laakiin waa inaad u oggolaataa ciddiyaha inay sidoo kale neefsadaan dhawr maalmood.
Ka dib markaad ilaalisay ciddiyahayaga, ma jiro wax la mid ah inaad marsato jaakad hore ee dhalada saldhigga ah. Xaaladdan, waxaad dooran kartaa lakabka dhaldhalaalka hufan ama mid leh casaan aad u khafiif ah ama dhammaystiran oo qaawan. Tani waxay siin doontaa midab yar oo sidoo kale iftiimin doona manicure laftiisa. Marka lakabka koowaad uu qallalo, waxaad siin kartaa tan labaad si aakhirka manicure -ku uu u yeesho iska caabin badan.
Tilmaamaha wanaagsan ee manicure
Marka dhererka ciddiyaha uu ka badan yahay cad, waa run inaan dooran karno inaan dhaldhalaalka si toos ah ugu marsado burushka. Dabcan, inta aad leedahay xirfad ama tababar. Laakiin haddii aad doorbideyso inaad ku ciyaarto si badbaado leh, markaa wax la mid ah ma aha inaad sharad ku gasho tilmaamaha qaarkood ama dhejiska shaqadan. In ay dhab ahaantii dhuuban yihiin si loo qiimeeyo laakiin wax yar uun. Waxaa jiri doona saldhigga ugu quruxda badan manicure -ka. Waxaan u dhigi doonaa dhinaca geeska, waxaan ku rinjiyeyn doonaa dhaldhalaalka cad oo waan ka qaadnaa marka dhammaan qeybihii hore ay engegeen. Hadda wax yar dhalaal oo tus!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Manicure -ka Faransiiska ee guriga ciddiyaha gaagaaban
Waa maxay kombucha? Faa'iidooyinka cabitaanka casriga ah